अस्ट्रेलियामा पानीको हा’हाकार मच्चिएपछि १० हजार ऊँट गो’ली हानी मा’रिने ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /International/अस्ट्रेलियामा पानीको हा’हाकार मच्चिएपछि १० हजार ऊँट गो’ली हानी मा’रिने !
पानीको हा’हाकार भएपछि अस्ट्रेलियाले १० हजार ऊँट गो’ली हा’नी मा’र्ने भएको छ। सुख्खा मौसमका कारण पानी पाउन मु’श्किल भइहेको समयमा ऊँटहरुले धेरै पानी पिउन थालेपछि पानीको स’मस्या झनै बढेपछि स्थानीयले ऊँट मा’र्न आग्रह गरेका थिए। हाल दक्षिण अस्ट्रेलियामा पानीको हाहाकार मच्चिएकोले पाँच दिन लगाएर यी १० हजार ऊँटहरु हेलिकप्टरबाट गो’ली हानी मा’रिने अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छन्।
अस्ट्रेलियामा ऊँटको संख्या १० लाख २० हजार हाराहारीमा छ। १९ औं शताब्दिमा ऊँट अस्ट्रेलियामा अफगानिस्तान र भारतबाट भित्र्याइएको थियो। त्यस्तै महिना दिनभन्दा बढी बितिसक्यो तर अष्ट्रेलियाको आगो नि’भ्ने सुरसार छैन। गत साता भने अष्ट्रेलियाबाट संसारलाई नै भावुक बनाउने तस्बिर बाहिरिए। ती तस्बिर मान्छेका नभई आगलागीबाट म’रेका र बाँ’च्न सफल भएका वन्यजन्तुका थिए ।
अष्ट्रेलियाका जंगलमा नोभेम्बर-डिसेम्बरतिर आगलागी हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। तर यसपालि गर्मी सिजन अष्ट्रेलियाका लागि अ’भिषापजस्तै बनेर आयो र यो अझै नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। अहिले भइरहेको आ’गलागी अष्ट्रेलियाको इतिहासमै सबैभन्दा ख’तरनाक छ। आगलागीमा परी कम्तीमा १५ जना मानिसले ज्या’न गु’माएका छन्, सयौं घर जलेर ध्व’स्त भएका छन्।
लाखौं एकड जमिनका बिरूवा र पशुपंक्षी खरानी बनेका छन्। गर्मी चाँडै सकिनेवाला छैन। केही दिनअघि दक्षिण पूर्वी अष्ट्रेलियाका हजारौं नागरिक र छुट्टी मनाउन गएकाहरूलाई आपतकालिन उद्धार गर्नुपर्‍यो। अहिलेसम्मकै बढी तापक्रम, लामो खडेरी र श’क्तिशाली हुरीबतासको संयोजनले यसपालि अष्ट्रेलियामा आगोको वि’ध्वंश बढेको हो।